Ntekwasa Ties Manufacturers na Suppliers | China ntekwasa Ties Factory
Ntekwasa tie bụ ụdị preformed abụọ nkesa tie ma ọ bụ helical ejima agbatị na e mepụtara ka e meere eduzi n'elu ma ọ bụ n'akụkụ nke uzo nke poselin insulator.
Plastic ntekwasa n'akụkụ tie na-eji maka kpuchie efe n'elu bundled eduzi na MV na HV eletriki nkesa netwọk.
Plastic kpuchie preformed agbatị na-etinyere na ụzọ abụọ, na arụnyere na-abụghị onye ọ bụla ọzọ. Ike ga-eji dị ka ma n'elu na akuku agbatị na insulator.
Preformed insulator tie ka nke na-ekpo ọkụ itinye elu ike kpaliri ígwè, n'ụzọ zuru ezu kpuchie polima, nke daputara iferi metal waya nke tie, na ikpuchi ya. Na-enye elu nketa na ọkụ arụmọrụ na kacha mma mkpuchi e ji mara nke etinyere ngalaba.
Nri size of helical n'akụkụ tie dị mfe ịghọta site agba koodu.
Jera si waya kpụrụ n'akụkụ agbatị enye nnọọ obi ike nchebe maka USB n'oge kasị ahụkarị ụdị ngagharị: vibration, galloping na-arụnyere na na post ụdị insulator.
The pụrụ iche, onye-ibe imewe enweghị ihe ọ bụla bolts ọ bụ elu-nrụgide na-ejide ngwaọrụ ekwe nkwa mfe echichi na ogologo ndụ oge nke preformed ntekwasa insulator agbatị.
Jera bụ ike ịzụlite preformed waya grips na preformed n'akụkụ agbatị dị ka gị cable nkọwapụta, insulator n'olu dayameta na anya n'etiti okporo osisi ya.
Welcome ịkpọtụrụ anyị!
Ntekwasa tie CO120 (120-150)